Hetauda Khabar - आँखा पाक्ने रोग के हो ? कसरी बच्ने ? जानी राखौं
आँखाको दानाको सबभन्दा वाहिरी तह (Conjunctiva) संक्रमण लाई आँखा पाक्ने रोग (Conjunctivitis) भनिन्छ । जब यो तहमा संक्रमण हुन्छ , यो सेतो वाट रातो हुन थाल्छ । सँगसँगै आँखाको डिल सुन्निने , आँशु धेरै वग्ने ,कचेरा आउने ,आँखा असजिलो हुने, घाममा हेर्न गाह्रो हुने, विझाउने आदी लछण देखा पर्दछन ।
यो रोगले शुरुमा आँखाको वाहिरी नानी (cornea) मा असर नगरे पनि विस्तारै रोग वढ्दै गएपछि गर्न सक्छ । आँखाको वाहिरी नानी मा असर गरेपछि घाममा हेर्न गाह्रो हुन, आँखा विझाउन वढ्ने ंतथा दृष्टिमा समेत धमिलो पन आउन थाल्छ । यो रोग सवै उमेर समुहका मानीसलाई हुने संभावना उत्तिकै रहन्छ । प्रायजसो वच्चामा यो रोगमा आँखाको डिल भित्र एक किसीमको झिल्ली बन्दछ जसलाई समयमै निकाल्नु पर्दछ अन्यथा त्यो झिल्ली त्यही टासीएर पछिसम्म समस्या गर्न सक्छ ।
यो रोग निको हुन सामान्यत २ देखी ३ हप्ता लाग्छ । कसैकसैलाई भने त्यो भन्दा वढी २ महिना सम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले यो रोग लाग्दा चाँडो निको भएन भनेर आत्तिनु पर्दैन ।
नियमीत रुपमा जाँच गराएर औषधी प्रयोग गरे विना कुनै जटीलता आँखा ठीक हुन्छ । यो रोगको उपचार सामान्य एन्टिवायोटीक थोपा वाट गरीन्छ । तर कुनै पनि औषधी आँखामा हाल्नु भन्दा पहिले आँखा जाँच गराउनु अति नै आवश्यक छ । परिक्षण गराउन आउने विरामी मध्ये अधिकांशले पहिलेनै कुनै न कुनै औषधी जथाभावी रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । जसको कारणले उपचारमा समस्या त हुन्छ नै औषधीको नकरात्मक प्रभाव पनि आँखामा पर्न सक्छ । यसरी जथाभावी प्रयोग गरिने औषधी मध्ये स्टेरोईड(Steroid) समुहको औषधी पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ , जुन विना परीक्षण प्रयोग गर्नै नहुने औषधी हो । यो औषधी जथाभावी रुपमा प्रयोग गर्दा आँखामा जलविन्दु जस्तो नराम्रो रोग पनि लाग्न सक्छ । अझ कसैकसैले आँखामा परम्परागत राख्ने औषधी जस्तै रक्सीजन्य पदार्थ, वोटबिरुवाको रस, आमाको दुध, वाख्राको दुध, जडिवुटी, मानिसको पिसाव, लालगेडी, आदी पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । यस्ता औषधीमा संक्रमण जन्य किटाणु हुनेहुदा आँखा ठिक नभइ झन विग्रने डर हुन्छ । त्यसैले यस्ता औषधी राख्नुहुदैन, राखेको थाहापाएमा तुरुन्त सफा पानिले अाँखा धुनुपर्दछ र अाँँखा अस्पताल मा पठाउनुपर्दछ ।
आँखा पाक्ने रोग मुख्य गरी भाईरस र व्याक्टेरिया जस्ता अति सुक्ष्म जिवाणु ले गर्दा हुन्छ । यसमा पनि हिजो आज भाईरस जन्य संक्रमण धेरै देखीन थालेको छ । यो रोग खास गरी मौषम परिवर्तन हुने वेलामा वढी देखीने भएता पनि आजकाल सालैभरी यो रोगको संक्रमण पाउन थालिएको छ ।यो रोग अती छिटो सर्ने सरुवा रोग हो । परिवारमा कसैलाई यसको संक्रमण भए पुरै परिवारमा सर्ने संभावना रहन्छ । यो रोग संक्रमीत विरामीमा रहेको जिवाणु कुनै न कुनै माध्यम वाट स्वस्थ्य आँखामा पुगे सर्न सक्छ । मुख्यगरी रोगीले प्रयोग गरेको रुमाल , तौली , सीरानी ,एउटै ओछ्यान स्वस्थ्य मानीसले प्रयोग गरेमा यो रोग सर्ने संभावना बढी हुन्छ । त्यसैगरी रोगी संग हात मीलाउदा तथा परिवारमा कसैलाई यसको संक्रमण भए मोवाईल फोन , रिमोट कन्ट्रोल आदी वाट पनि यो रोग सर्न सक्छ । रोगीको आँखामा हेर्दा पनि रोग सर्छ भन्ने भ्रम पनि कतै कतै पाईन्छ तर रोगीको आँखामै हेरेको कारणले यो रोग सर्दैन ।
यो रोग बाट जोगीन माथी उल्लेखीत कुराहरु बाट टाढै रहनु पर्दछ । त्यसैगरी स्कुल जाने बच्चालई रोग लागे स्कुल पठाउनु हुदैन अन्यथा स्कुलमा अरुलाई पनि रोग सर्न सक्छ । रोगीलाई औषधी हाल्नु अगाडी र औषधी हाले पश्चात राम्रो संग साबुन पानीले हात धुनु पर्दछ । त्यसैगरी आँखा छुने , माड्ने गर्नु हुदैन । संक्रमीत विरामी भीडभाडमा नजानु उचीत हुन्छ तथा आँशु पुछ्दा रुमालको सट्टा कपास वा टिस्यु पेपर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
तुलसी प्रसाद चुडाल
सजिलो आँखा सेवा केन्द्र हेटौंडा